Iinyanga ezimbini zokuqala zobomi umntwana usicatshangelwa ukuba usana olusandul 'usana, kwaye ezi zilandelayo zithathwa ngumntwana. Kutheni ukuhlukana okunjalo? Yintoni ekhethekileyo ngeli xesha? Ukubaluleka, okanye, ukuba uthanda, ubuqhetseba beli xesha lusetshintsheni ukusuka kumbindi ukuya kwincinane. Ngexesha leenyanga ezimbini, iinkqubo ezininzi zomzimba ziphuhliswa, iinkqubo zomsebenzi obalulekileyo zihambelane kunye nezinye izinto ezibalulekileyo zenzeka.
Ngeli xesha, enye yeenkqubo ezibaluleke kakhulu kwaye eziyinkimbinkimbi zitshintsha ngokutshintshileyo, oko kukuthi inkqubo yembonakalo. Kukho utshintsho olomeleleyo kulo. Umzimba omncinane ufunda ukuyisebenzisa. Oomama abaninzi baqaphela ukuba umntwana ekuqaleni, njengokungathi akukho nto ibona, nangona ngamanye amaxesha kubonakala ngathi ukhangele into ethile ngokucophelela. Amehlo omntwana asoloko ehlanjululwa, amehlo "athambile" ngokuzimela. Yaye nangona oku kubonakala kungavamile okanye uphawu lwesifo, akufanelekile ukukhathazeka. Sonke sahamba ngeli xesha, sonke safunda ukujonga. Kwaye bafunda ngeminyaka yokuqala yobomi. Ukuba umntu unemibuzo ecacileyo ukusuka kulo xesha, uya kukhunjulwa ukuba ngokukodwa yonke into "yema ngasentla," kwaye le nto yodwa yimiba emininzi yombono wethu.
Iimpawu zenkqubo yokubonwa kweintsana:
Ingane ibona iiveki ezimbini zokuqala zibi kakhulu, amehlo akhe akwazi ukwahlula ngokukhanya kancinci - emnyama, akukho zicaciso ezicacileyo. Oku kungenxa yokuba akakwazi ukulawula amehlo akhe, izihlunu zabo zibuthathaka, kwaye zona ngokwazo zincinci. Ukongezelela, ukuxhamla kwe-neural phakathi kwentsholongwane ye-optic kunye nenxalenye ye-occipital ye-cortex ye-cerebral ayizange yenziwe ngokupheleleyo. Nsuku zonke izihlunu ezijongene nokuxhaswa kwe-lens "ziqhutywe" - zinamandla, i-cornea ikhula kwaye ngenxa yoko, umbono ubonakala ngokucacileyo. Kwakhona umntwana ngeli xesha ufunda ngokukhawuleza ukuba ugxininise umbono kwizinto. Kuphela emva kolu xeshanye unokwazi ukuba ngaba umntwana uvelisa i-strabismus. Ewe, amehlo angakwazi ukuhlangana kunye nokusabalalisa ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa yonke imihla iyanyamalala. Ukunyuka kwamehlo kulungelelaniswa ngakumbi.
Abanye abaphandi ababandakanyekayo ekuboneni iintsana bakholelwa ukuba kwiiveki zokuqala umntwana ubona umfanekiso "onqabileyo", akukho mphumo wembono, kwaye uguqulwa phantsi. Uxinzelelo oluqhubekayo kwimisipha ebonakalayo, ukukhumbula nokuzisebenzisa ukujonga izinto kubangela ukuba umntwana aqale ukumbona, kuba sonke sisetyenziselwa. Oku kwaqinisekiswa kwiinkqubo zokuvavanya kwaye kwachaswa, ukuba uluvo olufanayo alukafiki.
Ekupheleni kweveki ezimbini zokuqala zomntwana umntwana unokukwazi ukwahlula into enkulu, eqaqambileyo kwaye uyayijonga xa ihamba kancane. Bonke abantwana abasandul 'ukuzalwa bayabonakala ngokugqithiseleyo, ngenxa yoko babona izinto ezikude zingcono. Oku kungenxa yokuba izihlunu ezilawula i-lens ziphantsi kancinci kunokuba zijonge into esondeleyo. Ngokufanayo, usana olutsha luba nobubanzi obuncinci kwintsi yombono, umntwana ngokuqhelekileyo ubona ngaphambili. Kwaye izinto ezikuloo macala ayisekho kwimida yommandla wakhe wombono.
"Izinto eziphambili" izinto - ubunqunu bomama nesifuba umntwana ubona kakuhle, kodwa oku kubeka izimo zokusinda.
Emva kweenyanga ezimbini, umntwana unokukwazi ukubona izinto ngokufanelekileyo aze 'azigcine' ngamehlo abo ukuba ahambe kwinqwelo ejikelezayo. Ukukwazi ukuphakamisa nokunciphisa amehlo akho ukubona kwaye kwinqanaba elimele liza kuye kamva. Emva koko, akusebenzi umsebenzi olula - ukufunda ukulawula umzimba wakho.
Njengoko sele kuthethwe ngazo, kwiinyanga ezimbini umntwana unokugcina umkhondo wezinto ezihamba ukusuka ecaleni ukuya kwelinye icala, ngoko uya kulandela umdlalo ohambahambayo, uthembela emehlweni akhe. Nangona kunjalo, umbono omdala oqhelekileyo kuthi awuyi kuveliswa de kube yiminyaka emihlanu.
Ngokwemvelo, ukubonakala kweintsana kufuneka kuphuhliswe, ukususela kwiminyaka yenyanga kwesikritshulo sakhe, unako ukuxhoma iselula - ithoyizi eyisiqulatho ngamathoyizi, indlela yokukhawuleza iqalisa kwaye ijikeleza imidlalo kwaye izandile.
Umntwana wakho uya kuvuyela ukulandela isifundo sokuhamba nesandi. Yilungise kwisikhumba esilandelayo ngaphandle kwentloko yomntwana, kodwa phezu kwesisu sakhe, malunga namasentimitha angamashumi amathathu.
Kwiiveki zokuqala emva kokuzalwa, akuyimfuneko ukudala imimiselo "yesiqhelo" kwintsana exhasa ukukhanya okukhanyayo malunga newashi. Iintsana zidinga ilanga emini - oku kuya kwenza ukuba afunde ukusebenzisa amehlo, kwaye isikhumba sakhe sivelisa i-vitamin D. Ebusuku, vumela ubusuku bukhanyise. Ngoko umntwana uya kuzincwina kwaye ukhululeke xa evuka.
Phambi kwamehlo omntwana wakho kufuneka athatyathwe ngenyameko. Jonga izidumbu zangaphandle. Oku, okokuqala, akumnandi kuye, kwaye okwesibini, kuyingozi ukubonisa amehlo. I-eyelash nayo iyakhula ngokungafanelekanga kwaye, xa ixilisa, iqala i-cornea, engakhokelela ekuvukeleni.
Kwakhona, ngunyaka wokuqala wobubomi, umntwana ukhuthazwa ukuba athathe i-ophthalmologist kanye emva kweenyanga ezintathu ukujongana nophuhliso olufanelekileyo lwenkqubo ebonakalayo.
Inyanga yokuqala yobomi bentsana
Unyaka wokuqala wobomi obusana
Ukuqhaqhazela, ukukhawuleza kwe-diaper, i-pustular lesions
Swan bonke: UAnastasia Volochkova waphinda wagxeka
Luhlobo luni lwamanzi endimele ndiyisele kwaye lukhulu kangakanani?
Ziziphi iinqanaba lokuzimela
Iimpawu ezifuna unyango oluphuthumayo
Indlela yokulahla iimfazwe zezityalo
Indlela yokwenza umyeni wakhe aye emsebenzini?
Indlela yokuphatha umkhuhlane owomileyo ekhaya
Cosmetics "Impilo yaseSiberia"
I-Shrimp esuka kwi-shrimps kwi-spicy sauce
Isonka kunye neesonka ezicandiweyo kunye noshizi
Bessonova Anna, ndidanisa wena